चिसोमा टन्सिलले सतायो ? यसरी घरमै गर्न सकिन्छ उपचार – Krazy NepaL
February 23, 2021 865
वास्तवमा यो त्यस्तो ग्रन्थी हो, जसले सामान्य अवस्थामा हानिकारक ब्याक्टेरियाबाट शरीरलाई रक्षा गर्छ । मुखबाट शरीरमा जाने ब्याक्टेरिया रोक्ने काम यसले गर्छ । तर, जब यो ग्रन्थी नै संक्रमित हुन्छ भने, त्यसले शरीरमा कति जटिल समस्या निम्त्याउँछ ।
Prevकिन जान पर्यो पैसा स्वहा पार्न ब्युटी पार्लर ? यसरी घरमै गर्नुस् फेसियल !
Nextछालामा चायापोतो दागधब्बा तथा रुखोपन देखियो ? हुनसक्छ यस्तो समस्या